Lonke uchungechunge imikhiqizo
Ikesi le-BB Cushion
Icala lePowder Powder
Qedela Muhle Case Line
Muhle Soft Tube
Lip Amafutha Case
Lip isicwebezelisi Case
Amabhola Powder Case
Magnet Ukuvalwa Imikhiqizo
I Cosmopack Asia
I Cosmopack Asia wawenziwa ngo-November 12 kuya ku-14, 2019, e-Asia Umhlaba Expo Arena, okuyinto bahlangana phezulu emhlabeni iphakeji abakhiqizi, kufakwe izinto zokusetshenziswa futhi ekwakhiweni, ukukhiqizwa imishini, design ekufakeni, ukukhiqizwa izinkontileka, amathuluzi ukukhiqizwa izimonyo ilebula eyimfihlo. kuba am ebalulekile kwezohwebo eyayihlanganisa umcimbi waminyaka zezingcwenti kanye Asian ubuhle umkhakha.
Inkampani yethu (Shantou HuaSheng Plastic Co. Ltd) sihloniphekile ukuze ubambe iqhaza kulo mkhosi waminyaka yonke, futhi idokodo lethu 11-G02.In yesehlakalo, thina ukuboniswa ezihlukahlukene yethu imfashini umbala izimonyo iphakeji ukuchaza ngokuningiliziwe mayelana nemikhiqizo yethu ukusetshenziswa futhi ukuthuthukiswa, ukwenza amakhasimende ethu ngokugcwele imikhiqizo kanye namasevisi ethu.
Kuyinto udumo lwethu enkulu ukuhlangana eziningi amakhasimende wavakashela idokodo lethu futhi abanesifiso imikhiqizo yethu ngesikhathi embukisweni!
I Cosmopack Asia yisikhathi lwesishiyagalombili ukuthi inkampani yethu uye wahlanganyela, ukumaketha isu lethu emhlabeni wonke. Kusukela ekuphuculeni izinga lenkonzo & imikhiqizo ngaphakathi enkampanini kanye ukunqwabelana ukumaketha isu isipiliyoni, huasheng iye uselulama.
Manje Isibikezelo esitobhini esilandelayo ukumaketha global:, Cosmoprof Bologna 2020.12-15 MARCH
Ebheke phambili ukuhlangabezana nawe e-Italy ngonyaka ozayo!